बिहेको ४० वर्ष सम्म पनि हेमा मालिनी ५ मिनेटको दुरीमा रहेको धर्मेन्द्रको घर किन जाँदिनन् ? – AB Sansar
November 4, 2020 adminLeaveaComment on बिहेको ४० वर्ष सम्म पनि हेमा मालिनी ५ मिनेटको दुरीमा रहेको धर्मेन्द्रको घर किन जाँदिनन् ?
मुम्बइ। बलिउडकी ड्रिम गर्ल हेमा मालिनी विवाह भएको ४० वर्ष सम्म पनि ५ मिनेटकै दुरीमा रहेको श्रीमान धमेन्द्रको घरमा गएकी छैनन् । हेमाको घरवाट धमेन्द्रको घरमा कोही जान्छ भने त्यो हेमाको छोरी हुन् । त्यो पनि छोरी ३४ वर्ष को उमेरमा मात्र घरमा गएकी हुन् । उनकी छोरी ईशा हुन् जो ५ वर्ष पहिले २०१५ मा मात्र धर्मेन्द्रको घर गएकी थिइन् । त्यतिबेला ईशा ३४ वर्षकी भइसकेकी थिइन् । *** यो समाचारको पूरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ****
किताबमा ईशाको हवाला दिँदै लेखिएको छ ‘म काकासँग भेट्न चाहन्थें र आफ्नो तर्फबाट सम्मान दिन चाहन्थें । उहाँले मलाई र आहानालाई धेरै माया गर्नुहुन्थ्यो र हामी पनि अभयका निकै नजिक थियौं । हामीसँग उहाँको घर जानेबाहेक कुनै बाटो थिएन । उहाँ अस्पतालमा हुनुहुन्नथ्यो । त्यसैले मैले सनी दाईलाई फोन गरें, उहाँले भेट्ने सबै व्यवस्था मिलाइदिनुभयो ।
’किताबका अनुसार हेमाको घर आदित्य धर्मेद्रको ११ औं रोड हाउस भन्दा केवल ५ मिनेटको दूरीमा छ । तर हेमाकी छोरी ईशालाई त्यहाँसम्म पुग्न ३४ वर्ष लाग्यो । ईशा १९८१ मा जन्मिएकी हुन् र उनी आफ्ना पिताको घर २०१५ मा गएकी थिइन् ।
पुस्तकका अनुसार बिहेपहिले धर्मेन्द्रकी पत्नी प्रकाश कौरसँग कैयौं पटक समारोहमा भेटेकी थिइन् । तर, बिहेपछि दुबैको बाटो फरक भयो । हेमाका अनुसार उनी कसैलाई डिस्टर्ब गर्न चाहन्नथिन् । धर्मेन्द्रले आफ्नो र छोरीहरुको लागि जे गरे त्यसबाट आफू खुसी भएको हेमाले बताएकी छिन् । *** यो समाचारको पूरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ****